किन आवश्यक उमेर अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण ? – korea pati
July 22, 2020 Korea patiLeaveaComment on किन आवश्यक उमेर अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण ?
हामीकहाँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रवृत्ति पाइदैन । अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज नभएका कारण पनि धेरैले रोग पालेर बसेका छन् ।
कुनै न कुनै शारीरिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । गंभिर रोग लागिसकेपछि मात्र अस्पताल धाउने गरिन्छ । यद्यपि कुनैपनि रोगले थलिनुअघि नै स्वस्थ्य परीक्षण गरिरहने हो भने संभावित रोगबारे सुरुमै थाहा हुन्छ र त्यसको उपचार पनि सहज हुन्छ । कुन उमेरमा कस्तो स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक हुन्छ त ?